Bit By Bit - လေ့လာခြင်းအပြုအမူ - 2.3.4 မပြည့်စုံ
အများစုမှာကြီးတွေဒေတာသတင်းရင်းမြစ်သူတို့သင်သည်သင်၏သုတေသနများအတွက်ချင်လိမ့်မည်ဟုသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောအသိ, အမပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသုတေသနထက်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖန်တီးထားခဲ့သောအချက်အလက်များ၏ဘုံ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များပြီးသားထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ခဲ့မေးခွန်းကိုမမေးခဲ့ရှိပြီးသားစစ်တမ်းအဖြစ်, မပြည့်စုံနှင့်အတူဆက်ဆံ၏အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါပြီ။ ကံမကောင်းစွာပဲမပြည့်စုံ၏ပြဿနာများကိုကြီးတွေ data တွေကိုပိုမိုလွန်ကဲဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုအခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အပြုအမူများနှင့်သီအိုရီ Construction operationalize မှဒေတာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်: ငါ့အတှေ့အကွုံမြားတှငျ, ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုလူမှုရေးသုတေသနများအတွက်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၏သုံးမျိုးပျောက်ဆုံးခံရဖို့ကြတယ်။
မပြည့်စုံ၏သုံးမျိုး၏, သီအိုရီ Construction operationalize မှမပြည့်စုံအချက်အလက်များ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏အတှေ့အကွုံအတွက်ကြောင့်မကြာခဏမတော်တဆသတိမမူဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်, သီအိုရီ Construction တစ်သီအိုရီဆောက်လုပ်ရေးကြောင့် observable ဒေတာတွေနဲ့တည်ဆောက်ဖမ်းဆီးဖို့တချို့လမ်းအဆိုပြုဆိုလိုတယ်စိတ္တဇလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေလေ့လာကြောင်းအကြံဥာဏ်များနှင့်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီရိုးရှင်းတဲ့-မြည်ဖြစ်စဉ်ကိုမကြာခဏအတော်လေးခက်ခဲဖြစ်ထွက်လှည့်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရဲ့မျက်မြင်လက်တွေ့ပိုပြီးအသိဉာဏ်နေသောလူမျိုးကိုပိုပြီးငွေရှာသောပုံရိုးရှင်းတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားနေစိတ်ကူးကြကုန်အံ့။ ဤပြောဆိုချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အလို့ငှာ, သငျသညျ "။ ထောက်လှမ်းရေး" တိုင်းတာရန်လိုဒါပေမဲ့ထောက်လှမ်းရေးကဘာလဲ? Gardner (2011) ထောက်လှမ်းရေး၏ရှစ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုတကယ်ရှိပါတယ်စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ နှင့်တိကျစွာထောက်လှမ်းရေးဤပုံစံများကိုမဆိုတိုင်းတာနိုင်ကြောင်းလုပျထုံးလုပျနညျးမြားရှိသနညျး စိတ်ပညာရှင်တို့ကအလုပ်၏ကြီးမားသောပမာဏနေသော်လည်းဤမေးခွန်းများကိုနေဆဲတည်ပြီးသတ်တယ်အဖြေတွေကိုမရှိကြပါဘူး။
ကဒေတာအတွက်သီအိုရီ Construction operationalize ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထို့ကြောင့် ပို. ပင်အသိဉာဏ်၌နေသောသူတစ်ဦးအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ပြောဆိုချက်ကို-လူတွေကိုပိုပြီးဝင်ငွေပိုက်ဆံ-နိုင်ပါတယ်မျက်မြင်လက်တွေ့အကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ "စံချိန်စံညွှန်း," "လူမှုရေးအရင်းအနှီး," နှင့် "ဒီမိုကရေစီပါဝင်သည် operationalize ရန်အရေးကြီးပါသည်ပေမယ့်ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းသီအိုရီ Construction ၏အခြားဥပမာများ။ " လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များသီအိုရီဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဒေတာများဆောက်လုပ်ရေးတရားဝင်မှုအကြားပွဲစဉ်ကိုပဌနာ (Cronbach and Meehl 1955) ။ Construction ၏ဤတိုတောင်းသောစာရင်းအကြံပြုသည့်အတိုင်းတရားဝင်မှုတည်ဆောက်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ကြကြောင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖန်တီးမပေးခဲ့သည့်ဒေတာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါမူကားငါ၏အတှေ့အကွုံမြားအတွက်, ဆောက်လုပ်ရေးတရားဝင်မှု၏ပြဿနာများကို ပို. ပင်ဖြစ်ကြသည် (Lazer 2015) ။
သင်တစ်ဦးသုတေသနရလဒ်အကဲဖြတ်ကြသောအခါ, ဆောက်လုပ်ရေးတရားဝင်မှုအကဲဖြတ်ရန်တဦးတည်းမြန်ဆန်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုများသောအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့်အသုံးပြုထားသောအချက်အလက်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြောင့် Re-ဖော်ပြသောရလဒ်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပိုပြီးအသိဉာဏ်နေသောလူမျိုးကိုပိုပြီးငွေရှာကြောင်းပြသနိုင်ဖို့တောင်းဆိုနှစ်ခုမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့လေ့လာမှုများစဉ်းစားပါ။ ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမှာသုတေသီသရုပ်ခွဲထောက်လှမ်းရေး၏ Raven တိုးတက်ရေးပါတီမက်တရစ်စမ်းသပ်ခြင်း-တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာလေ့လာခဲ့စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကောင်းစွာဂိုးသွင်းသူတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ (Carpenter, Just, and Shell 1990) မြင့်မားတဲ့သူတို့ရဲ့အခွန်ပြန်ပေါ်ဝင်ငွေအစီရင်ခံ -have ။ ဒုတိယလေ့လာမှုမှာသုတေသီကြာကြာစကားများကိုအသုံးပြုတဲ့သူ Twitter ပေါ်တွင်လူပေါင်းဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်ဖော်ပြထားခြင်းဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်ဤသုတေသီများသူတို့ကပိုအသိဉာဏျနေသောလူမျိုးကိုပိုပြီးငွေရှာကြောင်းပြသပြီဟုဆိုကြသည်နိုင်ဘူး။ ဒုတိယသူတို့မဟုတ်စဉ်သို့သော်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုအတွက်သီအိုရီ Construction ကောင်းစွာ, ဒေတာများက operationalized နေကြသည်။ ဒီဥပမာသရုပ်ဖော်အဖြစ်ထို့ပြင်ပိုဒေတာကိုအလိုအလျောက် Construction တရားဝင်မှုနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မထားဘူး။ သင်ကတစ်ဦးသန်း tweets တစ်ဘီလီယံကိုတွိ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးထရီလီယံ tweets ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိဒုတိယလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုသံသယသငျ့သညျ။ ဆောက်လုပ်ရေးတရားဝင်မှု၏စိတ်ကူးနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်သုတေသီများမဟုတ်အဘို့, စားပွဲ 2.2 ဒစ်ဂျစ်တယ်သဲလွန်စ data တွေကိုသုံးပြီးသီအိုရီ Construction operationalized ပြီလေ့လာမှုများအချို့ကိုဥပမာပေးပါသည်။
စားပွဲတင် 2.2: သီအိုရီ Construction Operationalize ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဆိုလိုသည်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်သဲလွန်စ၏ဥပမာများ
(သာ Meta-Data) တက္ကသိုလ်ကနေအီးမေးလ်ပို့ရန်မှတ်တမ်းများ လူမှုဆက်ဆံရေး Kossinets and Watts (2006) , Kossinets and Watts (2009) , De Choudhury et al. (2010)
Weibo ပေါ်ကလူမှုမီဒီယာ၏ရေးသားချက်များ Civic ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု Zhang (2016)
အခိုငျအမာ (Meta-အချက်အလက်များနှင့်ပြည့်စုံသောစာသား) မှအီးမေးလ်ပို့ရန်မှတ်တမ်းများ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းရှိယဉ်ကျေးမှုမထိုက်မတန် Srivastava et al. (2017)
မပြည့်စုံလူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်တခြားပလက်ဖောင်းပေါ်အပြုအမူအပေါ်မပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်များ: သီအိုရီ Construction ဖမ်းယူဘို့မပြည့်စုံအချက်အလက်များ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တော်တော်လေးခဲယဉ်းပေမဲ့မပြည့်စုံ၏အခြားဘုံအမျိုးအစားများကိုမှဘုံဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုတကယ်သင်လိုအပ်ဒေတာစုဆောင်းရန်ဖြစ်၏ ငါစစ်တမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်ပြောပြသောအခါငါအခန်း3၌အကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအဓိကဖြေရှင်းချက် data တွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေအသုံးပြုသူ-attribute ကိုအခြကိုပဌနာနှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များရှိသည်ဟုမှတ်စရာမခေါ်ဘာလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှု၌, သုတေသီများအခြားလူများ၏ attribute တွေအခြတချို့လူတွေအပေါ်သူတို့ရှိသည်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ တစ်ဦးကတတိယဖြစ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းချက်မျိုးစုံဒေတာသတင်းရင်းမြစ်ပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်စံချိန်တင်ချိတ်ဆက်ဟုခေါ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးဥပစာအားဖြင့်ရေးသားခဲ့ Dunn (1946) အစဉ်အဆက်စံချိန်ချိတ်ဆက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့အလွန်ပထမဦးဆုံးစက္ကူအလွန်ပထမဦးဆုံးအပိုဒ်များတွင်:
"ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခုချင်းစီကိုလူတစ်ဦးဟာဘဝတစ်ဦးစာအုပ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဤသည်စာအုပ်ကလေးမွေးဖွားနှင့်အတူစတင်သည်နှင့်သေခြင်းနှင့်အတူအဆုံးသတ်ထားသည်။ ၎င်း၏စာမျက်နှာများကိုအသက်တာ၌ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ရပ်များ၏မှတ်တမ်းများကိုတက်လုပ်နေကြသည်။ စံချိန်ချိတ်ဆက်နေတဲ့အသံအတိုးအကျယ်သို့ဤစာစောင်၏စာမကျြနှာတပ်ဆင်၏ဖြစ်စဉ်ကိုအားပေးပြီးမှဘွဲ့နာမတော်ဖြစ်၏။ "
Dunn ကြောင်းကျမ်းပိုဒ်ရေးသားခဲ့သည်လိုက်တဲ့အခါသူအသက်စာစောင်မွေးဖွား, အိမ်ထောင်ရေး, ကွာရှင်းနှင့်သေမင်းကဲ့သို့အဓိကဘဝဖြစ်ရပ်များပါဝင်သည်နိုင်ကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလူတွေအကြောင်းကိုကြောင့်ဤမျှလောက်သတင်းအချက်အလက်မှတျတမျးတငျထားသောသူတို့အားကွဲပြားခြားနားသောစာမျက်နှာများ (ဆိုလိုသည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာတွေ) အတူတူခညျြနှောငျခံရနိုင်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, အသက်စာစောင်တစ်ခုမယုံနိုင်လောက်အောင်အသေးစိတ်ပုံတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘဝကဒီစာအုပ်သုတေသီများအဘို့ကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုလည်းပျက်စီးခြင်း၏ဒေတာဘေ့စဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ကြောင်း (Ohm 2010) ငါမျြးအခနျးကွီး6(Ethics) တွင်ဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်အဖြစ်, သိက္ခာမဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သော။